प्रोष्टेट ग्ल्याण्ड: विदेशमा बस्नेलाई बढी समस्या
२०७६ पुष ७ सोमबार
- डा. दिपक रौनियार
काठमाडौं - प्रोष्टेट ग्ल्याण्ड ( पुरुष ग्रन्थ्री वा प्रजनन् ग्रन्थ्री ) मा भएको संक्रमण समयमा नै उपचार गरिएन भने लामो समसम्म रहिरहन्छ । प्रोष्टेट ग्ल्याण्डमा सामान्य संक्रमण हुदाँँ उपचार गराए समयमा नै निको हुन्छ । भने लामो समयसम्म बेवास्ता गर्दा फैलदै जाने र अन्त्यमा क्यासर समेत हुन सक्छ ।
लामो समयसम्म प्रोष्टेट ग्ल्याण्डमा संक्रमण भएमा त्यसलाई चिकित्सकिय भाषामा प्रोष्टाटाइटिस भनिन्छ । यो अवस्था पनि उपचार गराउँदा निको हुन्छ । तर समयमा उपचार नगराए प्रोष्टेट क्यान्सर हुन सक्छ । प्रोष्टेट ग्ल्याण्डको समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
विदेशमा बस्नेलाई किन प्रोष्टेट ग्ल्याण्डको समस्या बढि हुने गर्दछ ?
नेपाली युवा करीब ३० लाख बैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा रहेको बताइन्छ । पाको उमेरका व्यक्तिहरुमा देखिने प्रोष्टेटको समस्या तथा असर पछिल्लो समय तिस चालिस वर्षकविदेशमा रहेका युवाहरुमा समेत देखिन थालेको छ । युवाहरुमा प्रोष्टेटको समस्याले हुने मुख्य असर यौन दुर्वलता बढी देखिन थालेको छ ।
प्रोष्टेटले बीर्य स्वस्थ राख्न र हुर्काउन मद्दत गर्छ । बीर्य त्यतिबेला नियमित रुपमा उत्पादन भइरहन्छ जतिबेला खर्च भइरहन्छ । जब बीर्य खर्च हुन छाड्छ अर्थात बीर्य स्थिर रुपमा रहन्छ, त्यसपछि समस्या उत्पन्न हुन थाल्छ । जति प्रोष्टेट निस्कियो प्रोष्टेटलाई उति नै फाइदा हुन्छ ।
कसरी निस्किन्छ बीर्य ?
सामान्यतया हप्ताको तीन पटक यौनसम्पर्क स्वस्थ्यकर मानिन्छ । त्यसबाहेक हप्ता वा दुई हप्तासम्म शारीरिक सम्पर्क गर्नुलाई पनि नराम्रो मानिहाल्नु पर्दैन । तर दुई हप्तापछि पनि शारीरिक सम्पर्क भएन भने प्रोष्टेटग्रन्थीको काम अबरुद्ध हुन थाल्छ । लामो समय बीर्य ननिस्कदा बीर्यको थैलीमा लेदो लाग्न थाल्छ । प्रोष्टेट नजिकैको बीर्यमा जव समस्या हुन्छ त्यो समस्या तत्काल प्रोष्टेटमा सर्न सक्छ । अर्थात प्रोष्टेट ग्लाण्डमा संक्रमण हुन्छ ।
प्रोष्टेटको संक्रमण देखिन थालेपछि तत्काल उपचार गराउनुपर्छ । यसको संक्रमण बढ्दै जादाँ पछि क्यान्सरको खतरा हुन्छ भने धेरैजसोमा यौन दुर्वलताको सम्भावना हुन्छ ।
प्रोष्टेट ग्ल्याण्ड जोगाउने उपायहरु ?
प्रोष्टेट ग्ल्याण्डमा जोगाउनका लागी शारीरिक क्रियाकलाप र फेरीएको जिवनशैलिले यसमा असर वा फाइदा पुर्याउँछ । त्यसका लागी केहि घरेलु उपाय पनि अपाउन सकिन्छ । केहि निश्चित समयमा बीर्य निस्कियो भने त्यसले प्रोष्टेट ग्याण्डमा हुनसक्ने असर कम हुन सक्छ । त्यसैले नियमित रुपमा शारीरिक गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
पुरुषग्रन्थीलाई जोगाउने निश्चित उपायहरु छन् । त्यमध्ये शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानि पिउनु एक उपाय हो । शरीरलाई कती पानी आवश्यक पर्छ प्रश्न उठ्न सक्छ । सामान्य २४ घण्टामा २ लिटर पानी पिसाबबाट जान्छ । १ लिटर पानि सास फेर्दा बाफ भएर जान्छ । १ लिटर पानि दिशा गर्दा जान्छ । जती पानि शरीरबाट बाहिर जान्छ त्यति ने पानि पिउनुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतय २४ घण्टामा ५ लिटर पानी पिउनुपर्छ । तर खाडि मुलुकमा अत्याधिक गर्मी छ छालाबाट पसिना धेरै जान्छ भने अझ धेरै पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । पिसाबको रंग हेरेर पानिको आवश्यकता अड्कल गर्न सकिन्छ । सामान्य अवस्थामा पानिको रंग हल्का पहेलो हुन्छ । तर पिसाबको रंग गाढा पहेले, रातो, धमिलो र गन्ध आउन थाल्यो भने शरीरलाई पानिको मात्रा कम भएको बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पानि बढि पिए सामान्य अवस्थामा आउँछ ।
कुनै पनि ब्याक्टोरीयाले पिसाबको बाटो हुदै प्रोष्टेट ग्ल्याण्डसम्म पुग्यो भने प्रोष्टेट ग्ल्याण्डमा पनि संक्रमण हुनसक्छ । सो संक्रमण हुन नदिन पिसाबको परिक्षण गराइराख्नुपर्छ । परिक्षण गराउँदा पिसाबमा ब्याक्टोरीया देखिएमा निर्मुल पार्नु पर्छ । पिसाब स्वस्थ्य भएपनि मिर्गौला तथा पेटको भिडियो एक्सरे तिन महिनामा गराइरहनुपर्छ ।
प्रोष्टेट ग्ल्याण्ड स्वस्थ राख्न केहि डाइटहरु आवश्यक पर्छ । प्रोष्टेट ग्ल्याण्डलाई हुर्काउन वा स्वस्थ राख्न म्याग्नेसियम, जिंक (काजु पिस्ता, बदाम, एल्मण्ड र ओखर जस्ता खाद्यपदार्थ) तत्व सेवन गर्नुपर्छ । त्यसैले खाडि मुलुकमा रहेका पुरुषले दैनिक चार पाँच वटा काजु, दश प्रन्ध्र वटा पिस्ता र बदाम, एल्मण्ड बेलुका भिजाएर बिहान १५ वटा खाने बानि बसाल्न आवश्यक छ । बर्गर चिज तारेको झानेका, चिल्लो पदार्थ भएको खानेकुरा खानुहुदैँन ।
प्रोष्टेट ग्ल्याण्डलाई जोगाउन घरेलु उपाय मलद्धारलाई माथीतिर तानेर १५ सम्म गन्ने र छोडिदिने । यो दिनमा ५ सय भन्दा बढि पटक भन्दा बढि गर्ने । यसो गर्दा प्रोष्टेट ग्ल्याण्डमा रक्त सञ्चार राम्रो हुन्छ । त्यहाँ अक्सिजन पुग्छ र विकारहरु हुन दिदैन । यो अभ्यास जुनसुकै समयमा गर्न सकिन्छ ।
(डा. रौनियार लाइफ लाइफ इन्टरनेशनल क्लिनीकमा कार्यरत छन् ।)